8 Ihe kpatara ịkwụ ụgwọ gị kwa Pịa Strategy Na-adaghị | Martech Zone
Ọnwa a na Edge nke Web Radio, anyị na-eje ije site na ịkwụ ụgwọ kwa Pịa azum, na-atụle iji okwu, na-enye a ton nke stats na ozi. Ndị na-ere ahịa na-amata uru dị ịtụnanya nke na-akwụ site na ịre ahịa ọ bụla nwere ike ị nweta mmata mgbe ị na-enweghị ikike ọchụchọ, nweta ụzọ, na ịnwe ndị na-ege ntị dị mkpa dị njikere ịzụrụ ihe ọzọ.
Nke ahụ kwuru, nzaghachi a na-anụkarị n'etiti ndị na-arụ ụka PPC bụ:
Oh, anyị gbalịrị PPC ma ọ naghị arụ ọrụ.
Anyị na-ebe warara na-elekwasị anya na ihe nkọwa nke nwara bụ ma nọgide na-ahụ mmejọ nke atụmatụ ndị ahụ ebupụtara. Aga m eme ihe n'eziokwu na ahụbeghị m otu onye ahịa ka ọ na-akwụ ụgwọ iji ụgwọ kwa Pịa mgbe a na-enyocha mkpọsa ahụ, gbuo ya nke ọma, wee kọwaa ya. Ndị a bụ ihe mere anyị ji hụ PPC ka ọ daa:
nkwa - Ndị ahịa chọrọ iji PPC nwalee mmiri mana ha achọghị ịbanye ha niile. Ikekwe ha chọrọ itinye ego $ 100 coupon ha natara na mail. Kedu ụzọ ọ bụla, mmefu ego izizi pere mpe nke na ha enweghị oke iji nwalee mkpokọta isiokwu, wezuga okwu ndị na-adịghị mkpa, ma nweta usoro ga-eduga n'ịmepụta echiche nke ma akara ogo ha na-akawanye mma na usoro usoro isiokwu iji. Ntinye ego mbu gi kwesiri ibu ihe kariri ugwo onwa gi nke ichoro na PPC iji nwalee, tụọ, melite ma tụọ atụmanya na ego gi na ndu, ndu ndu, na uru ịgbanwe. PPC abụghị otu mkpọsa ma ọ bụ ọrụ ọ bụla, ọ bụ usoro enwere ike ịka mma karịa oge ma chọọ njikwa site n'aka ndị ọrụ ruru eru.
Enweghị peeji ọdịda - Mgbe m pịp a PPC na ọ na-ewetara m na peeji nke obibi, m na-atụgharị anya m ozugbo. Ibe obibi gị bụ maapụ ọdịnaya gị mana mgbe m mere nyocha m nyere gị isiokwu ndị m na-achọ. Ikwesiri inwe otutu, ma oburu na obughi otutu otutu, peeji nke ọdịda nke na-eleba anya na isiokwu ndi ichoro!
Ntughari Nhọrọ - Ọ bụghị onye ọ bụla chọrọ ịzụta site na pp mgbasa ozi PPC. Fọdụ na-amalite ime mkpebi ma na-achọ ime nnyocha. Inye nhọrọ iji denye aha, budata akwụkwọ akụkọ, debanye aha maka ngosipụta, ma ọ bụ nhọrọ ndị ọzọ bụ mgbanwe niile nwere ike ịme ka onye ọrụ ọchụchọ banye na ndị ọbịa. Na n’ihi na ha edebanyeghị aha ya apụtaghị na ha agaghị aga yabụ ịkwesịrị ịdebe ihe omume ndị ọzọ na-eduga na ntụgharị. Imaara otutu ndi ahia gi bidoro jiri nbudata ede? Ma ọ bụ ndenye aha email? Chọpụta ka ị nwee ike ịme ụfọdụ onyinye ndị ahụ na mkpọsa PPC gị.
Ogbenye Mgbasa Ozi Mgbasa - Ọ na-eju m anya oge niile mgbe ụlọ ọrụ nwere otu peeji ọdịda nke meghere ma ụzọ ụgbọ ala na nke akwụ ụgwọ, mana ha enweghị usoro mgbasa ozi ọ bụla iji mata ọdịiche dị na nchịkọta. Yabụ, PPC nwere ike ịbụ nnukwu atụmatụ - ha enweghị ike ịkọwa site na ile ha nchịkọta. Nweta ụlọ ọrụ iji nyere aka hazie gị nchịkọta nke ọma ka ị wee nwee ike ịlele ọganiihu nke mkpọsa gị.
Enweghị ekwentị Ndepụta - Ahia obula kwesiri inwe Analytics-integrated oku-nsuso na saịtị ha. Ka ụwa na-agagharị agagharị, ọtụtụ ndị mmadụ na-egwupụ ile vidio ahụ ma ọ bụ gụọ akwụkwọ akụkọ ahụ ma na-akpọ nọmba ekwentị ahụ. Anyị nwere ndị ahịa na-ezighi ezi ekewapụta ahịa ahịa ha ma na-akpọ oku ekwentị niile na mgbasa ozi ọdịnala dịka telivishọn na redio. Ọ bụ ezie na ngalaba ndị ahụ na-akpọ oku, anyị maara na mgbasa ozi ịkwụ ụgwọ ha kwụrụ ụgwọ kwesịrị otuto maka ọtụtụ n'ime ekwentị ha ma anyị enweghị ike ịlele ya ruo mgbe ha tinye ego na azịza.
Enweghị Nnwale - Iberibe peeji ọdịda ka ezughị. Agba nke bọtịnụ ma ọ bụ ọbụna ntụziaka nke anya mmadụ na foto foto ngwaahịa nwere ike imetụta ọnụego ntụgharị nke ibe ọdịda. Nnwale ihu akwukwo bu ihe di egwu nke ugwo obula site na mgbasa ozi. Kwesịrị ịnwale ihe niile iji bulie CTR na mkpokọta ROI nke mgbasa ozi ịkwụ ụgwọ gị.
Ihe na-adịghị mma - Ogo ogo gụnyekwara ogo ọdịnaya dị na peeji nke ọdịda gị na ntụgharị na-emetụta oke ọdịnaya nke saịtị gị niile. Mpempe akwụkwọ ole na ole agaghị egbutu ya. Vidio, akaebe, iji okwu, data nkwado, akara ahịa, foto ndị ọrụ… ọdịnaya gị kwesịrị ịbụ ihe ga-akpali akpali maka onye ọbịa ahụ ịtụkwasị obi na ha nwere ike ịnweta ozi ha chọrọ mgbe ha dejupụtara akwụkwọ gị.
Enweghị Ihe Mgbaru Ọsọ - N’oge na-adịbeghị anya anyị nwere atụmanya batara ma nwee obi ụtọ n’ezie na ọ kọwapụtara ihe mgbaru ọsọ - ọ chọrọ nloghachi 7: 1 na mkpọsa ọchụchọ ya akwụ ụgwọ. Ghọta ebumnuche, ọnụego ntụgharị, na oge etiti iji tọghata na-enyere ụlọ ọrụ PPC gị aka ịghọta ụdị mkpa ha chọrọ iwepụta, ego ha kwesịrị iji emefu ihe ọ bụla, yana ogologo oge ndị ndu ahụ ga-ewe iji gbanwee. Ha ga - enwe ike ịhazigharị mkpọsa gị ka o wee nyere gị aka ikpebi mmefu ego maka ịga nke ọma.
Ekele dịrị Erin na Atụmatụ saịtị iji kpaa maka ụfọdụ n’ime ndụmọdụ ndị a - ị ga - eme n’ime ya Edge nke Web Radio ma gee anyị ntị na Stitcher, BlogTalkRadio, iTunes, Mgbasa ozi ma ọ bụ nke ọ bụla n'ime usoro ntanetị ndị ọzọ!
Tags: ihu igwe redioerin ebuambido peeji nkeakwụ ụgwọ mmefu egoakwụ ụgwọ ọchụchọ ọdịda peejikwụọ ụgwọ kwa Pịappcppc mmefu egoppc ọdịda peeji nkeusoro saịtị